ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေး တွေ့ဆုံ
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေး တွေ့ဆုံ
ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေး တွေ့ဆုံ	ကိုဝိုင်း	| အင်္ဂါနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၀၆ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၅၆ မိနစ်	ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေ ၁၀ ပါတီက ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ရန်ကုန်တိုင်း နိုင်ငံရေးမှူး ဦးအောင်သိန်းလင်းနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် လွှတ်တော်အတွင်း အရေးကြီးသည့် ဥပဒေများ လွှတ်တော်တွင် မတင်သွင်းခင် ကျန်ပါတီများကို ကြိုတင်အသိပေးရန် အပါအဝင် အချက် လေးချက် တင်ပြခဲ့သည်ဟု တွေ့ဆုံပွဲ တက်ခဲ့သူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစု NDF ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း က ပြောသည်။ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဘက်က တွေ့ဆုံလိုကြောင်း စတင်ဖိတ်ခေါ်လာသဖြင့် တွေ့ဆုံစဉ် လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု ဥပဒေ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွတ်မြောက်ရေး၊ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေး ကိစ္စများ တင်ပြခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းက “ကြိုတင် ကျနော်တို့သိအောင် လုပ်ပေးပါလို့၊ အခု လယ်ယာမြေ ဥပဒေဆိုရင် ကျနော်တို့ ဘယ်လိုမှ ကြိုပြီး မသိဘဲနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က အတည်ပြုပြီးပြီ။ အမျိုးသား လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးနေပြီ ဆိုတော့မှ ကမန်းကတန်း လေ့လာပြီးတော့ အကြံပြု ဝေဖန်ရတာတွေ ကမန်းကတန်း လုပ်ရတယ်လို့ ပြောခဲ့ ပါတယ်။” ဟု ပြောသည်။ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအမတ် ဦးဌေးဦးက သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ပြည့်သူ့လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့သော လယ်ယာမြေ ဥပဒေ မူကြမ်း တင်သွင်းစဉ်က အဖြစ်အပျက်ကို ရည်ညွှန်းသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။လွှတ်တော်တွင်း အာဏာရပါတီက တင်သွင်းသော ဥပဒေမူကြမ်းအများစုမှာ ကျန်ပါတီများမှ လွှတ်တော်အမတ် များအတွင်း ကြိုတင်လေ့လာခွင့် မရကြသည့်အတွက် လွှတ်တော်ပြင်ပ ညှိနှိုင်းမှုတခုဖြစ်သည်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်က အတည်ပြုထားသည့် ဦးဌေးဦး၏ လယ်ယာမြေ ဥပဒေကြမ်းကို “အခိုင်အမာ ပြည့်စုံစေရန် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းတရပ်အဖြစ်” သတ်မှတ်ကြောင်း အမျိုးသား လွှတ်တော်က အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နေ့တွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ယင်းဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က မူဝါဒများချမှတ်ခြင်း၊ အချက်လက်များ ရယူခြင်းတို့ကို တဆင့်ပြီး တဆင့် ဆောင်ရွက်ပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရကဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စု အဆင့် အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်စေပြန်လည်ရေးဆွဲရန် ပေးပို့မည်ဟုလည်း ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ကရင် ဖလုံ စဝေါ်ပါတီနှင့် ရှမ်းပါတီ SNDP ကိုယ်စားလှယ်များမှာမူ မအားလပ်မှုကြောင့် ဦးအောင်သိန်းလင်းနှင့် အင်းလျားကန် မြကျွန်းသာ စားသောက်ဆိုင်တွင် ဒီဇင်ဘာ လေးရက်နေ့ ညနေပိုင်း တွေ့ဆုံပွဲနှင့်၊ မတွေ့ဆုံမီ ၁ဝ ပါတီအကြား ကြိုတင်ညှိနှိုင်းသည့် ဒီဇင်ဘာ သုံးရက် အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။ဒီဇင်ဘာ သုံးရက် အစည်းအဝေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ RNDP အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဦးလှစောက ဦးအောင်သိန်းလင်းတို့ တွေ့ဆုံမှု အဆင်ပြေလျှင် “နေပြည်မှာ သူတို့ရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦးနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ကမ်းလှမ်းလာတယ်ပေါ့။ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်း တွေ့ကြတဲ့အတွက် ကျနော်တို့လည်းတွေ့ဖို့ပဲ ယေဘုယျ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။” ဟု ပြောသည်။ ဦးအောင်သိန်းလင်းနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် RNDP မှ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ဦးသာထွန်းလှ တက်ရောက်ခဲ့သည်။၁ဝ ပါတီအဖွဲ့က လယ်ယာဥပဒေမူကြမ်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးလိုကြောင်းနှင့် သဘောကွဲလွဲနေသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိစ္စနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆက်လက်ဆွေးနွေးလိုသည်ဟု ဆိုသည်။ဒီမိုကရေက်တစ်ပါတီမှ ဦးသုဝေနှင့် ဒေါ်သန်းသန်းနု၊ NDF မှ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းနှင့် ဒေါက်တာဦးဝင်းနိုင်၊ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီ UDP မှ ဦးသိန်းတင်အောင်၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီမှ ဦးမျိုးညွန့်နှင့် ဦးအောင်သန်း၊ ညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီမှ ဦးထွန်းရွှေ၊ ချင်းအမျိုးသားပါတီမှ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံတဦး၊ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ပါတီမှ နိုင်ခင်မောင် တို့လည်း တက်ရောက်ကြသည်။
We have 84 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved